မိဘအုပ်ထိန်းသူများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မပါဘဲ ပညာရေးကဏ္ဍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အောင်မြင်နိုင? - Yangon Media Group
မိဘအုပ်ထိန်းသူများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မပါဘဲ ပညာရေးကဏ္ဍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အောင်မြင်နိုင?
မိဘအုပ်ထိန်းသူများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမပါရှိဘဲ ပညာရေးကဏ္ဍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် အောင်မြင်နိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးကဆိုသည်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအနေနှင့် ‘စာဖတ် ကြစို့’ စီမံကိန်းဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပြီး Max Power Co., Ltd (သာကေတ)မှ လှူဒါန်းသော စကားဖြူကျောင်းစာကြည့် တိုက်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ယင်းကဲ့သို့ပြော ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”မိဘများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့ ဒေသခံပြည်သူများရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုက အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ မိမိတို့ စတင်တာဝန်ယူတဲ့အခါမှာ ကျောင်းထွက်နှုန်းများတဲ့အတွက် ကျောင်းထွက်သူ ပပျောက် ရေးကို ဦးတည်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်း အပ်နှံတဲ့အခါမှာ မည်သည့်အခကြေးငွေ လက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုမျှ လက်မခံခဲ့ပါဘူး။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်မှုကြောင့် ကျောင်းထွက်နှုန်း တွေ လျော့ကျခဲ့ပြီး ကျောင်းနေမြဲနှုန်းတွေ တက်လာခဲ့ပါတယ်”ဟု ယင်းကဆိုသည်။ ယခုအခါတွင် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနည်းတူ ၁၂ တန်းပညာရေးကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ထိုသို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရာတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မိဘအုပ်ထိန်းသူများ၊ ပြည်သူများနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။
”ပညာသင်ယူရာတွင် စာမေးပွဲရမှတ်များများရရှိရန် သင်ယူခြင်းထက် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ကျောင်းနေပျော်ပြီး သင်ယူရတဲ့ဘာသာရပ်များရဲ့ တတ်ကျွမ်းမှုများရှိစေ ရေးအတွက် အလေးပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ကို အသိပေးပြောကြားလိုပါတယ်။ ကျောင်း သား၊ ကျောင်းသူများကို နိုင်ငံ့သားကောင်းများအဖြစ် ပြုစုပျိုးထောင်ရာမှာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအချင်းချင်း ရိုင်းပင်းကူညီတတ် စေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်”ဟု ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးကဆိုသည်။ သို့မှသာလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သည့်အခါတွင် အတူတကွ အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လာမည့်နှစ်တွင် Grade-3 နှင့် Grade-6 အတန်းများကို ကျောင်းသုံးဖတ်စာအုပ်အသစ်၊ ဆရာကိုင်စာအုပ်အသစ်များဖြင့် သင်ကြားပေးမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ကြောင့် Grade-3 အတွက် မူလတန်းပြ ဆရာ ဆရာမအားလုံး၊ Grade-6 အတွက် အလယ်တန်းပြ ဆရာ ဆရာမအားလုံးကို သင်တန်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့ ပြင် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်စေရန်အတွက် လာမည့်နှစ်များတွင် ကျောင်းအားကစားပြိုင်ပွဲများကို ကျင်းပနိုင် ရေး အလေးပေးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ကျောင်းများတွင် စာကြည့်တိုက်အချိန်များ၌ စာကြည့်တိုက်များကို အချိန်ပြည့်အသုံး ပြုနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ စာကြည့်တိုက်များမှ ဆည်းပူးလေ့လာသော ပညာရပ်များကို စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်လျော ညီထွေစွာဖြင့် အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ အသုံး ပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် စာကြည့်တိုက် ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်အတွက် လှူဒါန်းကြသည့် အလှူရှင်များ၊ ဆရာ ဆရာမများ၊ မိဘအုပ် ထိန်းသူများ၊ ပြည်သူများအား မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုပါကြောင်းနှင့် စာကြည့်တိုက်များ ရေ ရှည်အသုံးချနိုင်ရေး အားလုံးက ညီညီညွတ် ညွတ်ဖြင့် ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြစေလိုသည်ဟုဆိုသည်။
ချီလီ အသင်းနည်းပြ ဖြစ်လာမည့် သတင်းများအား ဘီရစ်ဇို ငြင်းဆန်ပယ်ချ